4 Ndinokurayira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu, achatonga+ vapenyu nevakafa,+ ndichishandisa kuratidzwa kwake pachena+ uye umambo+ hwake, 2 kuti paridza shoko,+ shingaira kuriparidza mumwaka wakakodzera,+ mumwaka unotambudza,+ tsiura,+ ranga, rayira, nomwoyo murefu+ nounyanzvi hwokudzidzisa. 3 Nokuti pachava nenguva yavasingazoshiviriri kudzidzisa kunopa utano,+ asi, maererano nezvavanoda, vachazviunganidzira vadzidzisi kuti vafadze nzeve dzavo;+ 4 uye vacharamba kunzwa chokwadi, vachitendeukira kungano.+ 5 Asi iwe, svinurira+ zvinhu zvose, tambura nezvinhu zvakaipa,+ ita basa romuevhangeri,+ ita ushumiri hwako zvizere.+ 6 Nokuti ndiri kutodururwa sechinopiwa chinonwiwa,+ uye nguva yakakodzera yokusunungurwa+ kwangu yava pedyo. 7 Ndarwa kurwa kwakanaka kwazvo,+ ndamhanya kusvika kumugumo,+ ndachengeta kutenda.+ 8 Kubvira panguva ino ndakachengeterwa korona yokururama,+ iyo Ishe, mutongi akarurama,+ achandipa pazuva iroro+ somubayiro,+ kwete ini chete, asiwo vose vaya vakada kuratidzwa kwake pachena. 9 Ita zvose zvaunogona kuti ukurumidze kuuya kwandiri.+ 10 Nokuti Dhemasi+ akandisiya nokuti akada mamiriro+ ezvinhu epanguva ino, uye akaenda kuTesaronika; Kresenzi kuGaratiya,+ Tito kuDharimatiya. 11 Ruka oga ndiye aneni. Tora Mako uuye naye, nokuti anondibatsira+ pakushumira. 12 Asi ndatumira Tikiko+ kuEfeso. 13 Paunouya, uuye nejasi randakasiya riina Kapo kuTroasi,+ nemipumburu, kunyanya iya yematehwe. 14 Arekizanda+ mupfuri wemhangura akandiitira zvinokuvadza zvizhinji—Jehovha achamutsiva maererano nemabasa ake+— 15 newewo umuchenjerere, nokuti akashora mashoko edu kwazvo. 16 Pakuzvidzivirira kwangu kwokutanga hapana akanditsigira, asi vose vakandisiya+—ngavarege havo kuzviverengerwa+— 17 asi Ishe akamira pedyo neni+ akandipa simba,+ kuti kuparidza kuitwe zvizere uye marudzi ose akunzwe achishandisa ini;+ uye ndakanunurwa pamuromo weshumba.+ 18 Ishe achandinunura pamabasa ose akaipa+ uye achandiponesa nokuda kwoumambo hwake hwokudenga.+ Ngaakudzwe nokusingaperi-peri. Ameni. 19 Ndikwazisirewo Priska+ naAkwira neimba yaOnesiforasi.+ 20 Erasto+ akasara kuKorinde,+ asi ndakasiya Trofimo+ achirwara kuMireto.+ 21 Ita zvose zvaunogona kuti usvike mwaka wechando usati watanga. Yubhuro anokukwazisa, naPudhenzi naRino naKraudhiya nehama dzose. 22 Ishe ngaave nemafungiro aunoratidza.+ Mutsa wake usina kukodzera kuwanwa ngauve nemi.